ပျူလူမျိုးနှင့်ပျူနိုင်ငံတော် စာတမ်းဖတ်ပွဲ ဘာလဲ?ဘယ်လဲ? > မွန်သတင်းအေဂျင်စီ
Home / အမြင်နှင့်သုံးသပ်ချက် / ပျူလူမျိုးနှင့်ပျူနိုင်ငံတော် စာတမ်းဖတ်ပွဲ ဘာလဲ?ဘယ်လဲ?
မွန်သတင်းအေဂျင်စီ November 29, 2012 အမြင်နှင့်သုံးသပ်ချက်2Comments 187 Views
ရေးသားသူ: ပျူနှင့်မြန်မာ > အမြင်နှင့်သုံးသပ်ချက်
မင်းထက်အောင် – ၂၁ ရာစုအစ မြန်မာ့သမိုင်းလောကမှာ ပျူသမိုင်းဖေါ်ထုတ်လိုသူ လက်သစ် ဗမာ့သမိုင်းဆရာအချို့ရဲ့ ကြိုးပမ်းချက်တွေခုဆိုဘွားကနဲ ပေါ်လာပါပြီ။ ပျူလူမျိုးနှင့် ပျူနိုင်ငံတော်စာတမ်းဖတ်ပွဲဆိုတာပါပဲ။ လက်ရှိမြန်မာပြည်မြေပုံထဲ အစောဆုံးရောက်ရှိသူတွေဟာ ပျူလူမျိုးများဖြစ်ကြပြီး အဆိုပါပျူတို့သည် ယနေ့ဗမာလူမျိုးများဖြစ်နေကြောင်း ခိုင်မာတဲ့သုတေသနပြုချက်တွေဆိုပြီး ဖြီးဖြန်းရမ်းတုတ် သမိုင်းအချက်အလက်တွေကို နောင်လာများအမွေဆက်ခံရန်အလို့ငှာ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်။
ချစ်စံဝင်း၏ သမိုင်းရေးသားခဲ့ချက် Facebook)
ယခင်သမိုင်းပညာရှင်များ (မြန်မာအပါဝင်) သုတေသနပြုစု ရေးသားထားခဲ့တဲ့မြန်မာ့သမိုင်း၊ တိုင်းရင်းသားတို့ ရှေးယခင်က ယုံကြည် လက်ခံထားတဲ့သမိုင်းတို့ကို ပြောင်းပြန်လှန်ပြီး သေနေတဲ့လူမျိုး Extinet ပျူဟာ လက်ရှိတိုင်းရင်းသား နယ်မြေအားလုံးမှာ အရင်ဦးဆုံးပြန့်နှံ့စွာနေထိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ပျူလူမျိုးတို့ဟာ အရင်ဦးဆုံးနေထိုင်ခဲ့တဲ့ နယ်မြေဖြစ်ခဲ့ပါကြောင်း လိုရာအတင်းဆွဲသွင်းမယ့် ပျူနိုင်ငံတော်စာတမ်းဖတ်ပွဲလို့လည်း လေ့လာသိရှိခဲ့ပါတယ်။ ပစ်မှတ်ကတော့ မွန်သမိုင်းတွေကို ပြောင်းပြန်လှန်ပစ်ဖို့ပါပဲ။ သုဝဏ္ဏဘုမ္မိ(သထုံ)ရော ဟံသာဝတီ(ပဲခူး)ပါမကျန် ပျူဒေသလို့ သတ်မှတ်အတည်ပြုလိုတဲ့ “အများညီ-ဤကိုကျွဲဖတ်” ကိစ္စမျိုးတွေပါ။
မွန်တို့၏ဌာနေဖြစ်သော ဘီးလင်းမြို့နယ် အရက်သည်မမြို့ဟောင်းနေရာ၊ ဝင်းကရွာမြို့ဟောင်းနေရာ၊ ကျောက်လုံးကြီးရွာ၊ တောင်ကြီးရွာတို့သည် ရှေးကပျူတို့နေထိုင်ရာမြို့ဖြစ်ကြောင်း ၂၀ဝ၂ ခုနှစ်က တက္ကသိုလ်များသမိုင်း သုတေသနဦးစီးဌာနအနေနှင့် ဒေါက်တာသန်းထွန်း အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ပါဝင်၍ ဦးစံဝင်း အတွင်းရေးမှူးအဖြစ်ပါဝင်သောအဖွဲ့က မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ သထုံ၊ မုဒုံနှင့် ဘားအံမြို့နယ်များ တွင်လည်း ပျူတို့နေထိုင်ခဲ့သောအထောက်အထားများ တွေ့ရှိရသည်ဟု အထက်ပါကွင်းဆင်း သုတေသနအဖွဲ့က ဆိုပါသည်။ မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်သုတေသနအဖွဲ့၏ ကွင်းဆင်းလေ့လာချက်အရ အရက်သည်မ၊ ဝင်းက၊ ဇုတ်သုတ်ရွာများတွင်သာမက မုတ္တမ၊ ကျိုက်မရော၊ ကျိုက္ခမီ၊ သံဖြူဇရပ်၊ ထားဝယ်၊ သာဂရ၊ မော်လမြိုင်၊ ပေါင်၊ မုဒုံနှင့် ရေးမြို့များတွင်ပါ ပျူအထောက်အထားကို တွေ့ရှိရသည်” ဟု ဘုန်းတင့်ကျော် ပေါက္ခရဝတီ သမိုင်းမစ်(သ်)နှင့် တွံတေးရှေးဟောင်းနယ်မြေ၊ ရုပ်ရှင်တေးကဗျာရသစုံမဂ္ဂဇင်း၊ ၂၀ဝ၇၊ စာ ၁၇၄ ကို ကိုးကား၍ရေးသားခဲ့တာပါ။
Previous မွန်သမိုင်းသုတေသနအဖွဲ့ ဖျက်သိမ်းသည့်သတင်းမဟုတ်မမှန်ကြောင်း အဖွဲ့ဝင်များပြော
ဒေါက်တာ ချစ်စံဝင်းဆိုတာ ဘယ်လို သမိုင်းပညာရှင်လည်း သိပါရစေ။ ပြဿနာက ဗမာက သူတယောက်တည်း မရပ်ရဲလို့ ကျန်တဲ့လူမျိုးတွေကို အကုန်မျိုချင်နေတာပါ။ အခုဗိုက်ပေါက်တော့မယ်လေ။
ဗမာစာဟာ မွန်စာကနေယူထားတယ်ဆိုတာကို ဆောင်းပါးတစောင်နဲ့ ရှင်းပြပေးပါလား? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။